Hevitra manicure izay hamafana amin'ity fahavaratra 2021 | Bezzia
Susana godoy | 02/06/2021 12:00 | fantsika
Na dia tsy araka ny nantenaintsika aza ny fahavaratra 2020 dia toa tamin'ny 2021 dia afaka manomboka manonofy isika na dia kely aza ary miaraka amin'ny loha foana. Noho izany, mba hamelomana ny fotoana kely kokoa, tsy misy toy ny filokana ireo hevitra manicure izay hamafana amin'ity fahavaratra 2021 ity, izay efa eo an-jorony.
Izany no antony tsy hahajanona anao any aoriana, mitondra andian-kevitra maromaro izahay, izay ilaina, ary ho tianao. Mba hahafahanao mandeha manambatra ny famaranana ny manicure tianao amin'ny loko tsara indrindra. Te hahafantatra momba izany ve ianao?
1 Inona no loko fantsika ampiasaina amin'ity fahavaratra 2021 ity
2 Ny fironana amin'ny fantsika 2021 dia miloka amin'ny voajanahary
3 Ny fanontana voninkazo dia iray amin'ireo hevitra manicure manafosafo
4 Antony geometrika eny am-pelatananao
5 Ny teboka polka dia ho hevitra manicure idealy anao koa
Inona no loko fantsika ampiasaina amin'ity fahavaratra 2021 ity
Manomboka amin'ny iray amin'ireo lohahevitra lehibe indrindra izahay, izay miresaka momba ny loko izay ho be indrindra amin'ity vanim-potoana ity. Ary koa, miloko mavokely izy ireo, amin'ny alokalony rehetra. Fa marina fa ny loko mavo dia hanana andraikitra lehibe ihany koa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny loko marevaka indrindra dia ireo hotafisinay amin'ity fahavaratra ity. Zavatra efa nantenainay satria mila famirapiratana bebe kokoa sy fifaliana bebe kokoa, koa amin'ny hoho. Azo antoka fa ny mavokely bubblegum miaraka amin'ny fotsy dia hamorona manicure tsy tonga lafatra, ary koa mavo hanome fiainana ny voninkazo sasany. Tsy hevitra tsara ve izany?
Ny fironana amin'ny fantsika 2021 dia miloka amin'ny voajanahary
Marina fa raha tianao ny mitafy azy ireo maranitra dia tsy hesorinay izany fiheverana izany. Saingy ankoatry ny safidy rehetra ananantsika, dia toa filokana amin'ny voajanahary ity fahavaratra ity. Ny hoho fohy kokoa, misy endrika boribory somary lavalava, no hanome ny tananao fomba hafa.. Marina fa amin'ny fahavaratra dia matetika isika no manana hetsika marobe ary toy izany dia tianay ny manova ny manaingo antsika. Avy eo eny, ho afaka misafidy ara-potoana amin'ny endriny tianao ianao. Aza adino fa ny fantsika voaomana tsara, miaraka amina poloney fototra toy ny miboridana na fotsy ary misy taratra famirapiratra dia handresy foana.
Ny fanontana voninkazo dia iray amin'ireo hevitra manicure manafosafo
Tsy misy isalasalana, ny famitana voninkazo dia iray amin'ireo hevitra manicure izay tsy miala amin'ny lamaody velively. Noho izany, tsy mampaninona antsika ny manova fomba. Ohatra, daisy kely foana no iray amin'ireo voninkazo tadiavina indrindra, na dia azonao atao aza ny manintona felany vitsivitsy na mamela ny tenanao hoentin'ny sticker. Ireo dia manome antsika famaranana matihanina tsara ary koa, tonga lafatra ahafahana misehoseho amin'ny fotoana manokana. Ho fanampin'izay, araka ny fantatrao tsara, azonao atao foana ny manao ny endrika ho hoho iray ihany na maromaro. Miankina aminao!
Antony geometrika eny am-pelatananao
Iray amin'ireo safidy ireo koa izay tsy azo tsikaritra. Eny, angamba marina fa tsy manana fe-potoana voafaritra izany satria isaky ny tsirairay amin'izy ireo dia ho fironana izy ireo. Izany no antony amin'ny fahavaratra dia toa tiany ny mitsingevana mafy kokoa noho ny hatramin'izay. Inona koa, raha ampidirina ny tadin'ny psychedelic sasany, tsara kokoa. Azonao atambatra amin'ny loko maivana sy mavitrika izy ireo mba hampiavaka azy ireo tsy toy ny teo aloha. Azo antoka fa izany fomba izany no hahatratraranao vokatra mamorona indrindra.
Ny teboka polka dia ho hevitra manicure idealy anao koa
Tahaka ny antony geometrika, ny teboka polka dia tsy iray amin'ireo hevitra hahagaga antsika ireo fa te ho eo anilantsika izy ireo na dia amin'ny fahavaratra aza. Noho izany, manome safidy tsara isika amin'ny fisainana azy fotsiny. Satria io no fotoana ahafahantsika manambatra ny loko izay tiantsika indrindra na mamela ny tenanay hoentin'ireo izay lazaintsika toy ny mavokely sy mavo hamoronana fironana. Ny malaza dia efa misafidy teboka polka manana fomba gradientTsy mety ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » fantsika » Ny hevitra manicure izay hamafana amin'ity fahavaratra 2021 ity